यी देश उड्न लागेका नेपालीहरु जान नपाउने भयो ! कारण यस्तो छ - jagritikhabar.com
यी देश उड्न लागेका नेपालीहरु जान नपाउने भयो ! कारण यस्तो छ
अस्ट्रेलियामा अझै केही दिने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका खुला नहुने भएको छ । त्यहाँको यसअघि पर्सि (बुधबार)देखि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खुला गर्ने बताएको थियो । तर नयाँ भेरियन्टको कारोना भाइरसह फैलिएको भन्दै केहीदिन सीमानाका नखोल्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले दुई सता नयाँ कोरोनाबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै तत्काल सीमानाका नखोल्ने निर्णय गरेका हुन् । यसअघिको निर्णयमा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु पनि अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न पाउने भनिएको थियो । हालको निर्णयसँगै अष्ट्रेलिया जानलागेका कामदार तथा विद्यार्थीहरुलाई भने असर परेको छ ।
यसअघिको निर्णले नेपालबाट अध्यायनका लागि अष्ट्रेलिया जान लागेका विद्यार्थीहरु पनि १ तारिखदेखि नै उड्ने तयारीमा थिए । तर अब कम्तिमा पनि डिसेम्बर १५ सम्म अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । अष्ट्रेलियन नागरिकहरुलाई नै भने सीमामा प्रवेश रोक लगाइने छैन ।
अन्य समाचार | काठमाण्डाै | इजरायलले विदेशी नागरिक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्राेन’ को जोखिमका कारण पूर्वतयारी र रोकथामका लागि विदेशी नागरिक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको इजरायल सरकारले जनाएको छ । उसले सबै नाकाहरु समेत बन्द गराउने भएको छ ।
इजरायलमा पनि दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’को सङ्क्रमण भेटिएको छ । अबको दुई हप्ता विदेशी नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
नयाँ भेरियन्टको जोखिमपछि अहिले विभिन्न देशले दक्षिण अफ्रिका र आसपासका देशबाट हुने उडान बन्द गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र युरोपेली युनियनअन्तर्गतका देशले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाबे, बोत्स्वाना, अङ्गोला, मालावी, जाम्बिया, लेसेथोबाट हुने उडान बन्द गरेका छन् ।
भारतले पनि दक्षिण अफ्रिका, बोत्स्वाना र हङकङबाट आउने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।